ETA teknolojia avo lenta natolotry ny fanadiovana ny fifindra-monina Aostralianina
Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » ETA teknolojia avo lenta natolotry ny fanadiovana ny fifindra-monina Aostralianina
Airport • Vaovao Mafampana Aostralianina • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • fanorenana • teknolojia • Tourism • Fitaterana
Aogositra 12, 2021
ETA teknolojia avo lenta
Nihidy ho an'ny ankamaroan'ny mpitsidika vahiny i Aostralia amin'izao fotoana izao, saingy raha vao misokatra indray dia misy rindranasa vaovao hanamorana ny fitsidihan'ny mpitsidika ny firenena fantatra amin'ny anarana hoe Down Under afaka miankina amin'ny APP vaovao hanamorana ity dingana takiana hidirana ao amin'ny firenena ity.
Ny fampiharana ETA Aostraliana dia vokatry ny ezaka fiaraha-miasa miaraka amin'ny manam-pahaizana avy amin'ny Departemantan'ny Atitany Aostralianina, SITA, ary ny Vondrona Arq.
Natao sy novolavolaina tany Sydney, ny fampiharana dia mamela ny zom-pirenena mendrika hiditra am-pilaminana ho an'ny ETA, ao anatin'ny minitra vitsy monja, avy amin'ny findainy.
Mampiasà teknolojia nohamafisina mba hamenoana angon-drakitra avy amin'ny pasipaoron'ny mpangataka iray sy hisamborana ny biometrikany, ity fizotran'ny serivisy tena azo antoka ity dia tsy vitan'ny fampitomboana ny maha-marina sy manankarena ny angona fa manatsara be ny traikefan'ny mpampiasa.
Sita nanao ny lamin'ny rafitra ETA ho an'ny Lalao Olaimpika Sydney 2000 hanomezana fahitana mialoha an'ireo manam-pahefana amin'ireo mpitsidika an-tapitrisany mikasa ny hiampita ny sisintany ary hampihena ny tavoahangy ao amin'ny masoivoho aostralianina sy ny toeram-pisavana mpifindra monina. Hatramin'ny nanolorana azy, ny ETA dia niatrika ny fitsapana ny fotoana ary nitarika ny fomba hametrahana visa elektronika ho fantsom-pifandraisana mahazatra ho an'ny karazana visa tsotra (oh: Visa amin'ny fahatongavany) ataon'ny sampan-draharahan'ny fifindra-monina manerantany.
Mijanona ho toerana fitsangatsanganana malaza i Australia ary hampiseho ny fahombiazany ny ETA APP aorian'ny krizy COVID ankehitriny ary hisokatra indray ny firenena ho an'ny mpandeha.
Taorian'ny fanovana teknolojia maherin'ny 20 taona, tonga ny fotoana hamerenana amin'ny laoniny ny ETA amin'ny alàlan'ny fampiharana ETA aostralianina. Ny teknolojia vaovao sy ny paradigma vaovao dia miteraka fanovana ny fanantenana amin'ny fidirana sy ny traikefa ary ny serivisy, indrindra fa ny fanavaozana no motera mitondra ny fanovana.
Ny dingam-pikarohana sy ny fikarohana momba ny tetikasa dia misy ny fahatakarana ny persona sy ny filàn'ny dia lavitra. Nifantoka tamin'ny fahazoana fahalalana lalindalina momba ny fangatahana sy ny orinasa ary ny indostrian'ny fizahan-tany ny famaritana ny dian'ny mpampiasa ho avy farany.
Tamin'ny famolavolana vahaolana amin'izao fotoana izao amin'ny alàlan'ny teknolojia avo lenta, ny ekipa dia nieritreritra ny filàna fampisehoana vokatra azo antoka sy azo antoka ary manome ny fahaiza-manao sarotra mifandraika amin'ny fisamborana angona, ny fanamarinana, ny isam-batan'olona ary indrindra ny fanamarinana ny mombamomba azy. Nanao fanandramana ara-teknika, fampidirana ary mpampiasa izahay mba hahazoana antoka fa vonona ny vahaolana ary ny ivon'ny mpampiasa dia mijanona eo afovoan'ny endrika. Ny sosona abstraction dia nametaka ny teknolojia an'ny antoko fahatelo rehetra, ka nanaporofo izany ny ho avy ary mora ho an'ireo teknolojia ankehitriny mba hosoloina teknolojia vaovao sy tsara kokoa amin'ny ho avy.
Ny rafitra dia misy manerana ny fitaovana. Mba hitazomana izany fifantohana amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa izany, ny fampiharana dia nila nanolotra fomba mety sy mahitsy ahazoana visa aostralianina amin'ireo fitaovana amin'ny sehatra iOS sy Android.
Ahoana ny fomba fiasan'ny fampiharana?
Ny fampiharana dia mampiasa teknolojia finday (Optical Character Recognition (OCR) sy Near Field Communication (NFC)) mba hisamborana sy hametrahana ny mombamomba ny pasipaoro sy ny mombamomba azy mivantana avy amin'ny pasipaoro. Ny fahazoana marina ny angon-drakitra fampiharana manan-danja mivantana avy amina loharano atokisana dia manafoana ireo lesoka fidirana data sy tsy fitoviana misy fiatraikany amin'ny fanodinana visa.
Ny rindrambaiko dia manamarina sy manamarina pasipaoro elektronika amin'ny alàlan'ny fahafaha-manaon'ny smartphone an'ny NFC amin'ny fotoana fampiharana fa tsy amin'ny fetra ara-batana. Ny fidirana amin'ny chip passeport dia azo amin'ny alàlan'ny fampiasana OCR hamaky ny Machine Machine Readable Zone (MRZ) vita pirinty ao anaty pasipaoro ary hahazoana lakile. Ity lakile ity dia mamela ny chip hiditra sy hamarinina amin'ny alàlan'ny fanamarinana nomerika ao anaty puce, hiantohana ny pasipaoro tena izy ary ny chip aza tsy voatafika. Vantany vao voamarina ilay puce, dia vakiana ny angona momba ilay puce - izay misy ny antontan-taratasy momba ny dia, ny mombamomba azy ary ny sary nomerika an'ny tompon'ny pasipaoro. Ampitahaina amin'ny fakana sary selfie izy io aorian'izay.
Ny fizotry ny sary sary selfie dia manatanteraka fitiliana miaina sy manohitra ny fanararaotana manoloana ireo mombamomba ny risika amin'ny tarehy, izay manamafy ny fanamarinana ny mombamomba ny mpangataka. Ireto fitsirihana fiarovana lehibe ireto dia entina milamina amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny fampiharana fa tsy manelingelina ny mpangataka.
Ny OCR, NFC, sary selfie ary fiainana sarotra, ary ny fanaraha-maso anti-spoofing dia ampidirina ao anaty fampiharana amin'ny fomba vaovao, izay inoantsika fa voalohany iraisampirenena.
Ireo mpizaha tany dia manankina ny fampiharana amin'ny iray amin'ireo fananany sarobidy indrindra — ny angon-drakitra. Ahoana no niatrehanao ny olana momba ny fiainana manokana amin'ny fivoarany?
Nampiasainay ny fomba manokana momba ny fiainana manokana tamin'ny alàlan'ny famolavolana nandritra ny fivoaran'ny fampiharana, natomboka tamin'ny fanombanana ny fiatraikany amin'ny fiainana manokana mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ireo governemanta Aostraliana henjana ny tsiambaratelo momba ny fiainana manokana.
Ny angona manokana rehetra dia voatahiry ao anaty kitapom-bola azo antoka ao amin'ny fitaovan'ny mpampiasa. Tsy misy angona zaraina amin'ireo mpiara-miombon'antoka hafa, afa-tsy ny Raharaham-bahiny izay mitaky ny fampahalalana hanodinana ireo fampiharana ETA. Ny fehezan-dalàna sy fepetra dia napetraka mazava ao anaty ny fampiharana mba hanaiky ny mpampiasa alohan'ny handehanany. Izany dia manazava ny fomba fitazonana ny angon-drakitra azo antoka, ary koa ny fomba fampiasana sy fiarovana azy rehefa mampita izany amin'ny raharaha anatiny.
Mba hahazoana antoka bebe kokoa ny fiainanao manokana, ny mpangataka dia afaka mamafa ny antsipirian'ny tenany manokana sy ny fampiharana azy ireo taloha amin'ny fampiharana amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izany, ny fitaovana rehetra misoratra anarana amin'ny maso ivoho izay afaka mampihatra amin'ny anaran'ny mpangataka dia tsy mitazona ny antontan-taratasim-panazavana na ny fangatahana amin'ny fitaovany aorian'ny fandefasana ny fangatahana.
Ny fampiharana dia mampiasa fitehirizana azo antoka ao an-toerana sy ireo kaonty fanamarinana matanjaka. Ny serasera rehetra eo amin'ny fitaovana sy ny rafitra backend dia voahodina, miantoka ny fiarovana farany sy ny fifehezana ny angon-drakitra mpampiasa.
Inona no hevitra hatreto?
Hatrany am-piandohana, ny fizotran'ny famolavolana traikefa dia nametraka ho laharam-pahamehana ny fampiasana ny mpangataka miaraka amin'ny traikefa mpampiasa tsy misy friksi sy intuitive na amin'ny sehatra iOS na Android. Ny fampiharana vokany dia voaray tsara, miaraka amin'ireo mpampiasa marobe manampatra ny fahatsoran'ny fampiasana sy ny fanamorana.
Ny fanaraha-maso tsy tapaka, ny fitiliana fitondran-tena ary ny hevitry ny mpampiasa dia ao anatin'ny fomba famolavolana. Ny fahaizana manavao haingana ny app dia nahatonga fanatsarana hanampy amin'ny famakiana karazana pasipaoro isan-karazany, fanomezana fanohanana ny satan'ny fanodinana ary fanatsarana ny sarimiaina ho fitarihana torolàlana.
Ny valin-kafatra sarobidy nomen'ireo mpangataka amin'ny alàlan'ny fivarotana app sy ny asan'ny Contact Us an'ny app dia nahatonga ny sasany tamin'ireo fanovana sy fanatsarana natao hatramin'ny nanombohan'ny mpanamory fiaramanidina, ka vao mainka nanamafy ny fampiharana.
Ny firotsahan'ireo vondrona mpampiasa manerantany amin'ny fizahana fitaovana samihafa sy fanangonana fampahalalana momba ny traikefa an'ny mpampiasa dia nanome antoka ny fiasan'ny fampiharana manerana ny tontolon'ny fitaovana misy fahasamihafana sy ny fiovan'ny pasipa elektronika. Hatramin'ny nandefasana ny fampiharana tamin'ny Oktobra 2020, dia efa nanamora ny fandehanana tany Aostralia ho an'ny olona an'arivony maro nandritra ny areti-mandringana.
SAS Lisitra toeran-tany vaovao anatiny sy iraisam-pirenena ...
Ny fizahantany ao Jamaika dia mitazona lahateny lehibe momba ny fampiasam-bola
Fahasalamana maneran-tany: Tontolo Vaovao Taorian'ny COVID
Karazan-fizahan-tany dimy voalohany noresahina tamin'ny 2021
Fandaharana fitantanana COVID-19 natombok'i Premier ...
Mianara momba ny Medicare anio ao amin'ny Webinar an-tserasera maimaim-poana
Toeran-kaleha vaovao any Disney Cruise Line amin'ny 2023
Aeromexico dia mametraka ny drafitra momba ny fandaminana indray ny Toko 11
Fampianarana jeografia nasionaly: Banky any Egypt
Ahoana no ahafahanao mijanona ny olana amin'ny buffering video?
Horohoron-tany tany Kreta | Horohoron-tany tany Karpathos: A ...
Perricone MD dia manitatra ny Hypoallergenic CBD Sensitive Skin ...
British Airways: Tsy misy andriambavy sy tompokovavy intsony
ETA teknolojia avo lenta nampidirina ho fanadiovana ny fifindra-monina Aostralianina - eTurboNews | Fironana | Vaovao momba ny dia | Blog an'i Johnny G. Santo hoy:
12 Aogositra 2021 amin'ny 14:06
[…] ETA teknolojia avo lenta nampidirina ho fanadiovana ny fifindra-monina Aostralianina eTurboNews | Fironana | Vaovao momba ny dia […]